Maitiro ekuwana iyo nyowani macOS Mojave desktop muGnome | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura Apple yakaunza yayo nyowani vhezheni yemacOS inozivikanwawo seMojave. Iyo vhezheni iyo inotsvaga mune aesthetics, iyo aesthetic iyo vazhinji vedu yatinoda. Anesthetic iyo vazhinji vanofunga kuti macOS chete ine uye ndosaka vachisarudza zvigadzirwa zveApple. Asi iyi yekushongedza inogona zvakare kunge iri muGnu / Linux, uye kunyange kugadzirisa kana kuitisa nekukurumidza, sezvo Mojave ichiri beta.
Tevere isu tichaenda kukuudza maitiro ekuita dhesiki rekuchinja zvinoenderana nezuva kana rekupinda ratinoita, izvi ndizvo zvinosanganisirwa muMojave nyowani.Kutanga isu tinofanirwa tora iyo Mojave wallpapers kana mapikicha. Dzimwe mari dzatinogona kuwana kuburikidza nadzo Iyi link. Tichadawo faira inonzi Mojave.xml, UN faira iyo ichave iri pamusoro pekugadzira iyo slideshow kana shanduko yemapikicha.
Kana tangova neizvi: Kutanga isu tinofanirwa kugadzira dura mumusha medu unonzi «Mapikicha», mune iyi folda tinofanirwa kuvhura mifananidzo ye desktop. Isu tinofanirwa kuremekedza iyo nzira, saka hazvina kukodzera kushandura kero kana kupfupisa maforodha. Nekudaro, iyo nzira inofanirwa kuve inotevera:
Iye zvino zvatine folda nemifananidzo, isu tinofanirwa kumisikidza iyo imwecheteve.xml faira kuti ishande nemazvo. Mune ino kesi isu tinofanirwa kuchinja zita rekuti thanh nemazita emusha wedu. Saka isu tinofanirwa kuchinja mitsara:
Iye zvino zvatine izvi, isu tinongofanirwa kusarudza iyoveve.xml faira ine chishandiso Gnome tweaks, chishandiso chinotibvumidza isu kuti tishandure iyo artwork uye desktop theme. Kubva izvozvi Wallpaper ichachinja ichishandisa macOS Mojave wallpapers.
Mamwe mashoko - OmgUbuntu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Maitiro ekuwana iyo nyowani macOS Mojave desktop muGnome